"၂၀၂၀ မှာ ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ် (၇) အုပ်"
၂၀၂၀ မှာ ကြှနျတျောတို့တှဟော ကိုယျစီ စိတျကူးအိမျမကျတှနေဲ့ ပနျးတိုငျအသဈတှနေဲ့ ခမြှတျထားကွနလေောကျပွီပေါ့။
အခုဖွိုးက ၂၀၂၀ မှာ ဖတျသငျ့တဲ့စာအုပျ (၇) အုပျကိုရှေးခယျြပွီး ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီစာအုပျ (၇) အုပျကတော့...
(1) ဖွဈတညျခွငျး Michelle Obama- ဝငျးငွိမျး
နိုငျငံတကာမှာ အရောငျးရဆုံး စာအုပျတဈအုပျဖွဈတဲ့ ဖွိုးကိုယျတိုငျအားကအြတုယူရတဲ့ Michelle Obama ရဲ့ Becoming ဆိုတဲ့ စာအုပျလေးဟာ အိုဘားမားနဲ့ မီရှယျအိုဘာမားတို့ရဲ့ဖွတျသနျးလာခဲ့ကွတဲ့ ဘဝ အတှအေ့ကွုံ၊ မီရှယျအိုဘားမားရဲ့ ငယျစဉျဘဝ ဖွတျသနျးကွိုးစားလာခဲ့ပုံတှကေို ဖျောပွထားတဲ့ စာအုပျလေးပါ။ ဒါ့အပွငျ စာအုပျမှာ Relationship ဆကျဆံရေးတဈခုကို ခိုငျမွဲအောငျ ဘယျလိုတညျဆောကျရမလဲ၊ ကိုယျကိုယျတိုငျကရော ကိုယျ့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို ဘယျလိုရှာဖှသေငျ့လဲ စတဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို ဖျောပွထားတဲ့ စာအုပျကောငျးလေးပဲဖွဈပါတယျ။ English version ဆိုလဲဖွိုးအရမျးကွိုကျတဲ့စာအုပျတဈအုပျပါ!
(2) ဘာပဲဖွဈဖွဈ လှအောငျနပေါ၊ စာဖတျပါ - မသေင်ျကွနျဟိနျး
ဆရာမ မငျေ်သကွနျဟိနျးက ဖွိုးငယျငယျထဲက ဖတျနရေတဲ့ စာရေးဆရာမတဈယောကျပါ!
ဒီစာအုပျလေးကတော့ ဆရာမမသေင်ျကွနျဟိနျးရဲ့ အသဈထှကျရှိတဲ့ထားတဲ့ စာအုပျကောငျးလေးတဈအုပျဖွဈပါတယျ။ စာအုပျထဲက ဆရာမရဲ့ အမှာစာလေးအတိုငျး လူတိုငျးဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုသာမက ကိုယျ့ဘဝကိုပါ လှပအောငျ ပွောငျးလဲနိုငျတဲ့သူမြားပဲဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ဘဝကို ပွောငျးလဲနိုငျဖို့ စိတျနစေိတျထား၊ အတှေးအချေါ ပွုစုပြိုးထောငျပုံတှကေို ဆရာမကနေ ပွနျလညျမြှဝပေေးထားတဲ့ စာအုပျလေးပဲဖွဈပါတယျ။
(3) ပြျောရှငျခွငျး တံခါးပေါကျ - မာရငျရငျ
လူတိုငျးဟာ ပြျောရှငျခွငျးကို ရှာဖှတေတျကွပါတယျ။ ဟုတျတယျမလား? သောကတှနေဲ့ကွုံလာကွပွီဆိုရငျ စိတျထှကျပေါကျအနနေဲ့ တဈခုမဟုတျ တဈခုလုပျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုလုပျခွငျးက ပြျောရှငျမှုကို ရမယျလို့ ထငျမှတျတတျကွပါတယျ။ အခု ဒီစာအုပျလေးကတော့ စိတျကို ဘယျလိုထိနျးခြုပျမလဲ၊ စိတျပြျောရှငျအောငျ စိတျလှတျလပျမှုရလာစဖေို့ အတှကျ အထောကျအကူပွုစမေယျ့ စာအုပျလေးပဲဖွဈပါတယျ။
စာအုပျဖတျပွီး ပိုပြျောနိုငျပါစလေို့ ဖွိုးဆုတောငျးပေးတယျ။
(4) သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးကွီးဆုံးအရာ - မွတျငွိမျး
ဘဝမှာ ဘယျအရာက အရေးကွီးဆုံးဖွဈမလဲ
လူတျောတျောမြားမြားက လကျရှိ ကိုယျအတှကျ လိုအပျနတေဲ့အရာကို အရေးကွီးဆုံးလို့ ဖွမေိကွပါလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေဲ့ တကယျ အရေးကွီးတဲ့ အရာက ဘာဖွဈမလဲ၊ ရှငှေလေား၊ စညျးစိမျ ဥစ်စာတှလေား ဒီလို အရာတှကေို ဖွညျ့ဆညျးဖို့ရော ဘာတှလေိုအပျမလဲ စတဲ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို သုံးစှဲကွံဆနိုငျစဖေို့ ဒီစာအုပျလေးက အထောကျအကူပွုစမှောဖွဈပါတယျ။
(5) the one page marketing plan - မိုးရှငျး
စီးပှားရေးကို အခုမှစပွီးလုပျကိုငျမယျ့သူတှေ စီးပှားရေးကို စိတျဝငျစားတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ဖတျသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျးတဈအုပျဖွဈပါတယျ။ မိမိရဲ့ ကုနျပစ်စညျးကို Online သုံးပွီး ဘယျလိုဖောကျမလဲ၊ Customer အသဈတှရေဖို့ ဘယျလို လုပျဆောငျသငျ့လဲ၊ အမြားနဲ့မတူပဲ ပိုမိုထိရောကျတဲ့ Strategy တှကေို သုံးပွီး ဈေးကှကျထဲရောကျအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ စတဲ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ စာအုပျလေးတဈအုပျဖွဈတဲ့အတှကျ Marketing ကို စိတျဝငျစားသူတိုငျး ဖတျသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
(6) မွနျမာလူကြျော (၁၀၀) - မောငျဇယြော
ဒီစာအုပျလေးကတော့ ၂၀ ရာစု အတှငျးက ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ မွနျမာပွညျမှ ပုဂ်ဂိုလျ (၁၀၀) ကြျောတို့ရဲ့ အကွောငျးအရာစာအုပျပဲဖွဈပါတယျ။ သမိုငျးကို မမသေ့ငျ့သလဲ သမိုငျးထဲမှာ ထငျရှားပါဝငျခဲ့တဲ့ လူပုဂ်ဂိုလျတှကေိုလညျး မမသေ့ငျ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပျကို ဖတျခွငျးကွောငျ့ တဈခြိနျက မွနျမာပွညျမှာ ထငျရှားခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စာပေ၊ အနုပညာတို့မှာ ထှနျးပေါကျခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ (၁၀၀) တို့ရဲ့ အကွောငျးကို သိရှိနိုငျမှာဖွဈပါပွီး ကိုယျတိုငျလဲ ပဲလိုသမိုငျးဝငျထငျရှားတဲ့လူဖွဈအောငျကွိုးစားဖို့ inspiration ယူပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ ခတျေ လူငယျတှအေနနေဲ့ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ စာအုပျကောငျးတဈအုပျဆို မမှားပါဘူး။
(7) ၂၀၂၀ Better Life Planner- ဖွိုးဖွိုးအောငျ (food for your brain)
ဒီစာအုပျလေးကတော့ ၂၀၂၀ အတှကျ ပွငျဆငျနကွေတဲ့ သူတှအေတှကျ လုံးဝ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ စာအုပျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီစာအုပျလေးထဲမှာ
တဈနတေ့ာအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ task တှလေတဈလခငျြးစီမှာ ခမြှတျထားတဲ့ goals တှကေိုယျကွိုကျတဲ့ အခကျြလေးတှေ၊ ကိုယျပွုပွငျရမယျ့ အမှားတှအေရေးကွီးတဲ့ အမှတျတရတှေ
ရညျမှနျးခကျြတှေ၊ အိမျမကျတှကေို ကိုယျတဈယောကျတညျး သိဖို့အတှကျ ဒါမှမဟုတျ ရငျဖှငျ့ဖို့အတှကျ ဒီစာအုပျလေးထဲမှာ သိမျးဆညျးထားလို့ ရနိုငျပါတယျ။
ဒါတှပေဲလား? မဟုတျပါဘူး သငျ့ရဲ့ ဘဝ ၂၀၂၀ မှာ ဒီထကျပိုပွီး တိုးတကျလာစဖေို့အတှကျ၊ ကိုယျရော စိတျပါ ကနျြးမာလာစဖေို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ အခကျြလေးတှကေိုလညျး လ တဈလခငျြးစီ မတူညီတဲ့ အပိုငျးလေးတှနေဲ့ အကွံပေးထားတာလေးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
Credit : Phyo Phyo Aung (Food For Your Brain)
"၂၀၂၀ မှာ အဖတ်သင့်ဆုံးစာအုပ် (၇) အုပ်"
၂၀၂၀ မှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ်စီ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေနဲ့ ပန်းတိုင်အသစ်တွေနဲ့ ချမှတ်ထားကြနေလောက်ပြီပေါ့။ အခုဖြိုးက ၂၀၂၀ မှာ ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ် (၇) အုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီး ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ် (၇) အုပ်ကတော့...
(1) ဖြစ်တည်ခြင်း Michelle Obama- ဝင်းငြိမ်း
နိုင်ငံတကာမှာ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးကိုယ်တိုင်အားကျအတုယူရတဲ့ Michelle Obama ရဲ့ Becoming ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးဟာ အိုဘားမားနဲ့ မီရှယ်အိုဘာမားတို့ရဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံ၊ မီရှယ်အိုဘားမားရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝ ဖြတ်သန်းကြိုးစားလာခဲ့ပုံတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒါ့အပြင် စာအုပ်မှာ Relationship ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ခိုင်မြဲအောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရော ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေသင့်လဲ စတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ English version ဆိုလဲဖြိုးအရမ်းကြိုက်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ!
(2) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လှအောင်နေပါ၊ စာဖတ်ပါ - မေသင်္ကြန်ဟိန်း
ဆရာမ မေင်္သကြန်ဟိန်းက ဖြိုးငယ်ငယ်ထဲက ဖတ်နေရတဲ့ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ပါ!
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ဆရာမမေသင်္ကြန်ဟိန်းရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိတဲ့ထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲက ဆရာမရဲ့ အမှာစာလေးအတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမက ကိုယ့်ဘဝကိုပါ လှပအောင် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အတွေးအခေါ် ပြုစုပျိုးထောင်ပုံတွေကို ဆရာမကနေ ပြန်လည်မျှဝေပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
(3) ပျော်ရွှင်ခြင်း တံခါးပေါက် - မာရင်ရင်
လူတိုင်းဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်တယ်မလား? သောကတွေနဲ့ကြုံလာကြပြီဆိုရင် စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက ပျော်ရွှင်မှုကို ရမယ်လို့ ထင်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ အခု ဒီစာအုပ်လေးကတော့ စိတ်ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် စိတ်လွတ်လပ်မှုရလာစေဖို့ အတွက် အထောက်အကူပြုစေမယ့် စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ဖတ်ပြီး ပိုပျော်နိုင်ပါစေလို့ ဖြိုးဆုတောင်းပေးတယ်။
(4) သင့်ဘဝအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာ - မြတ်ငြိမ်း
ဘဝမှာ ဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးဖြစ်မလဲ
လူတော်တော်များများက လက်ရှိ ကိုယ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့အရာကို အရေးကြီးဆုံးလို့ ဖြေမိကြပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ တကယ် အရေးကြီးတဲ့ အရာက ဘာဖြစ်မလဲ၊ ရွှေငွေလား၊ စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေလား ဒီလို အရာတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ရော ဘာတွေလိုအပ်မလဲ စတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို သုံးစွဲကြံဆနိုင်စေဖို့ ဒီစာအုပ်လေးက အထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(5) the one page marketing plan - မိုးရှင်း
စီးပွားရေးကို အခုမှစပြီးလုပ်ကိုင်မယ့်သူတွေ စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို Online သုံးပြီး ဘယ်လိုဖောက်မလဲ၊ Customer အသစ်တွေရဖို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သင့်လဲ၊ အများနဲ့မတူပဲ ပိုမိုထိရောက်တဲ့ Strategy တွေကို သုံးပြီး ဈေးကွက်ထဲရောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Marketing ကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(6) မြန်မာလူကျော် (၁၀၀) - မောင်ဇေယျာ
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ၂၀ ရာစု အတွင်းက ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မှ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀၀) ကျော်တို့ရဲ့ အကြောင်းအရာစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းကို မမေ့သင့်သလဲ သမိုင်းထဲမှာ ထင်ရှားပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ခြင်းကြောင့် တစ်ချိန်က မြန်မာပြည်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စာပေ၊ အနုပညာတို့မှာ ထွန်းပေါက်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် (၁၀၀) တို့ရဲ့ အကြောင်းကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ပဲလိုသမိုင်းဝင်ထင်ရှားတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ inspiration ယူပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ခေတ် လူငယ်တွေအနေနဲ့ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဆို မမှားပါဘူး။
(7) ၂၀၂၀ Better Life Planner- ဖြိုးဖြိုးအောင် (food for your brain)
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ၂၀၂၀ အတွက် ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ သူတွေအတွက် လုံးဝ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ
တစ်နေ့တာအတွက် အရေးကြီးတဲ့ task တွေလတစ်လချင်းစီမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ goals တွေ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေ၊ ကိုယ်ပြုပြင်ရမယ့် အမှားတွေအရေးကြီးတဲ့ အမှတ်တရတွေ
ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သိဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် ရင်ဖွင့်ဖို့အတွက် ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဘဝ ၂၀၂၀ မှာ ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်လာစေဖို့အတွက်၊ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာလာစေဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက်လေးတွေကိုလည်း လ တစ်လချင်းစီ မတူညီတဲ့ အပိုင်းလေးတွေနဲ့ အကြံပေးထားတာလေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ပုံလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး လတျတလော သငျ့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေို ဖျောထုတျကွညျ့ရအောငျ
သင်ဟာ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်လား
သင်ဟာ EQ မြင့်တဲ့သူတစ်ယောက် ဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက် (၆) ချက်
ယနေ့ခေတ်မှာ သင်ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် (၈) မျိုး
မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ လေ့လာတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ အချက် (၅) ချက်